वैशाखमा निर्वाचन हुँदैन्, मंसिरमा निर्वाचन गर्नको लागि डा. दिक्षितको नेतृत्वमा चुनावी सरकार बनाउनुपर्छ : डा. सुरेन्द्र केसी (भिडिओसहित) « रिपोर्टर्स नेपाल
वैशाखमा निर्वाचन हुँदैन्, मंसिरमा निर्वाचन गर्नको लागि डा. दिक्षितको नेतृत्वमा चुनावी सरकार बनाउनुपर्छ : डा. सुरेन्द्र केसी (भिडिओसहित)
काठमाडौं, २४ माघ । राजनीतिक विश्लेषक डा. सुरेन्द्र केसीले तोकिएकै मितिमा कुनैपनि हालतमा निर्वाचन नहुने भन्दै बरु आगामी मंसिरमा निर्वाचन हुनसक्ने स्पष्ट पारेका छन् । आज (शनिरबार) रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको विशेष साक्षात्कारमा बोल्दै डा. केसीले प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन भएकोले यस विषयमा बाहिर टिकाटिप्पणी गर्न नहुने धारणा राखे । तर, दलका नेताहरुले भने बाहिर जथाभावी टिप्पणी गरेको उनको गुनासो छ ।
क्लबका सभापति ऋषि धमलाको सभापतित्वमा आयोजित साक्षात्कारमा बोल्दै उनले मंसिरमा निर्वाचन गराउनको लागि चुनावी सरकारको नेतृत्व नागरिक समाजका अगुवाई डा. सुन्दरमणि दिक्षितलाई दिनुपर्ने पनि बताए । उनले निर्वाचन त हुने तर त्यो निर्वाचन वैशाख १७ र वैशाख २७ गते भने नहुने दाबी गरे । उनले भने–‘निर्वाचन हुने/नहुने हाम्रो हातमा पनि छ । निर्वाचन भए अब मंसिरमा हुन्छ । तर, वैशाखमा कुनै पनि हालतमा हुँदैन् ।’ उनले भने,‘मेरो नेता उहाँ हो । हामी निश्पक्ष निर्वाचन गराउन सक्छौं । तर, मुलुकलाई निकास चाहियो नि । अहिलेको समयमा डा. दिक्षित उपयुक्त पात्र हो । मुलुकलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउन पाईँदैन् । अदालतको निर्णय चाँडो हुनुपर्छ । सबैले यो निर्णय मान्नुपर्छ ।’
उनले सत्तारूढ नेकपाको विवादको चुरो नै पदीय भागबण्डा भएको पनि तर्क गरे । उनले नेकपाले अहिले आएर लोकतन्त्रमाथि नाँगो नाँच देखाएको पनि टिप्पणी गरे । उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको स्वभावबारे कुरा गर्दै प्रतिशोध साँध्ने व्यक्तिको रुपमा चित्रण गरे । उनले भने,‘ओलीमा प्रतिशोधी भावना छ । उनी शक्तिको लागि जुनसुकै हदसम्म पनि जान सक्छन् ।’